नेपाल आज | गणतन्त्र मुख्य लाभ राजावादी कमल थापालाई भाग ९ (भिडियोसहित)
गणतन्त्र मुख्य लाभ राजावादी कमल थापालाई भाग ९ (भिडियोसहित)
नेपालआजले शुरू गरेको इतिहस सम्बन्धी शृंखलाको पहिलो चरणमा इतिहास विषयका प्रा. डा.सुरेन्द्र केसी हुनुहुन्छ । केसीसँग नेपालआजले इतिहासका पाटाहरू केलाउने क्रममा नवौं भागसम्म आइसकेको छ । यो भागमा डा.केसीले इतिहासका पात्रहरूबारे चिरफार गर्नुभएको छ । प्रस्तोता हरिराम रिमालसँग डा.केसीले यो भागमा नेपालको ऐतिहासिक चर्चा निम्नानुसार गर्नुभएको छ :
‘बेबी किङलाई स्वीकार गरेको भए राजतन्त्र रहन्थ्यो भन्ने कुरा इतिहास सम्मत छैन । जब कसैले आफ्नो शक्ति सम्पूर्णरुपमा परित्याग गरिसक्छ भने फेरि उसले यो वा त्यो बहानामा कसरी शक्ति प्राप्त गर्छ होला त ? यदि ज्ञानेन्द्रले भनेको कुरा सही हो भने त्यो कहाँ छ ? नेपालका नेताहरुले भनेको कुराहरु विश्वास गरिहाल्न सकिदैन किनभने राधाकृष्ण मैनालीले भारतबाट सेना ल्याएर भए पनि राजा फ्याल्नुपर्छ भनेर माधवकुमार नेपालले भने भनेर आफ्नो आत्मवृतान्तमा उल्लेख गरेका छन् । सिपी मैनालीले एक कार्यक्रममा राधाकृष्ण मैनालीले भनेको कुरा सत्य होइन भनेर भने । यस्तो कुरामा नेताको कुरा पत्याइँदैन ।
६२/ ६३ आन्दोलनको सबभन्दा बढी लाभ कमल थापालाई भयो । यसबाहेक माओवादीलाई शान्तिपूर्ण सम्भौतामा आउन सहयोग भयो । तर गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरुले भने त्यति बदला लिन सकेनन् ।
०७० सालको चुनावमा प्रचण्डको नराम्रो हार भयो । सिराहामा उनी विजय भएर आए, त्यो पनि प्रायोजित रुपमा उनलाई जिताएर ल्याइयो । ग्राण्ड डिजाइन केलाई मान्ने ? स्वयं उनलाई पनि जिताएर ल्याइयो । त्यसकारणले महत्वपूर्ण कुरा के हो भने, पहिलो संविधान सभालाई तुहाउने जुन दृष्टिदोष प्रचण्डहरुले बोके त्यसको आत्मघाती दोष उनीहरुले बेहार्नुपरेको हो ।
७२ को संविधान जारी हुँदाको परिस्थितिमा तेस्रो शक्ति भन्दा फरक खालको इच्छामा संविधान जारी भयो, त्यो शक्तिले त्यति खेल्न सकेन र नाकाबन्दीहरु यसकै परिणाम पनि हुन् । आन्तरिक रुपमा तीन दलको गठबन्धन भयो । त्यो गल्ती थियो । किनभने नाकाबन्दी यति घातक भयो कि त्यो रिकोभर गर्न पनि हामीलाई सय वर्ष लाग्छ ।
एक वर्षमा सरकारबाट धेरै अपेक्षा राखेको होइन । उनीहरुले नै पाँच छवटा बुँदाद्वारा हाम्रो मनोविज्ञानलाई उत्तेजित बनाइदिए । सिन्डिकेट कुरा, ३३ किलो सुन, एनजिओको कुरा, ५ हजार भत्ताका कुरा आदि । हामी त सरकाका अघि बच्चा हौं र सरकार अभिभावक । आफूले भोट दिएको सरकारले अपेक्षा पूरा नगर्दा बोल्न नपाउने ?’